Gammachis Taaddase: 'Hoggantuun Itiyoo Telekoom lubbuu isaa oolchuu danda'u ture' - BBC News Afaan Oromoo
Gammachis Taaddase: 'Hoggantuun Itiyoo Telekoom lubbuu isaa oolchuu danda'u ture'
Goodayyaa suuraa Hogganaan duraanii Itiyoo Telekoom damee Lixa biyyattii kan turan Obbo Gammachis Yunivarsiitii Wallaggaatti digirii sadaffaa barataa turan
Hoogganaan Itiyoo Telekoom damee Lixa biyyattii kan turan Obbo Gammachis Taaddase torban lama dura balbala mana isaanitti ajjeefaman.
Erga ajjechaan kuni raawwatamee booda gareen qorattootaa hundaa'e qorannoon kan itti fufe yoo ta'u hanga yoona shakkamaan tokko to'annoo jala ooluu isaa BBC'n garee qoratu kanarraa odeeffateera.
Haati warraa isaanii waggoota 13'f waliin akka jiraatan himan, Aadde Masarat Hundeessaa, qondaaltonni Itiyoo Telekoom lubbuu isaa oolchuu danda'u ture jechuun himatu.
Kunis, Obbo Gammachis waggaa tokko dura yaaliin ajjeechaa akka irratti raawwate eerun jijjiirraa hojii gaafatanis akka deebii gaarii argachuu dhaban dubbatu.
Abbaa ijoollee daa'ima lamaa kan turan Obbo Gammachis, jijjiirraa hojiif Hojii Raawwachiiftuu Olaantuu Itiyoo Telekoom waliin walii barreessaa turu isaanii dhaabbatichi BBC'f mirkanesseera.
Haa ta'u malee, deebiin dhaabbatichaa Obbo Gammachis akka hin gammachiifnes eera.
Gaafa ajjeechaan raawwate
Ajjeechaan guyyaa Dilbataa magaalaa Naqamtee bakka Calalaqii jedhamuufi bakka jireenyaa Obbo Gammachiisitti raawwate.
A.L.I Onkololeessa bultii 16, bara 2012 kan acheechaan raawwate mana namaa waamicha oollee akkuma mana galleeni jedhu Aadde Masarat. Mana galanii osoo hin turin bilbilli bilbilamuu himu.
''Wajjiniin bakkee turree gallee numaa mana gallee daqiiqaa muraasa booddeedha kuni kan ta'e. Naannoo sa'aatii 1 ta'u waa hir'uu natti fakkaata,'' jedhu guyyaatti abbaa ijoollee isaanii dhaban yeroo yaadatan.
Hogganaan Itiyoo Telekoom damee Lixaa ajjeefaman
Yeroo maatiin Obbo Gammachis manatti deebi'an hiriyyaan Obbo Gammachis duuba isaanii konkolaataa qabatee dhufaa ture.
Aadde Masarat akka jedhanitti, guyyaa itti aanu Obbo Gammachis Finfinnee waan dhaqanif 'poostaa tokkoon sitti fidadha' jedheeni jedhu.
Achiitii 'anumaa wayyaa jijjiirratu gaheera jedhee bilbile,' jedhu haati warraa isaanii.
Bilbilli (mobaayilii) bilbilame si'a lama yoo ta'u Obbo Gammachis yeroos keessummaa mana turef dhugaatii lallaafaa banaa akka turan himu.
''Gaafa inni [Obbo Gammachis] gadi itti bahe, daqiiqaa tokkoyyuu waan ture miti, sagalee meeshaa (dhukaasa) gaafan dhagahu iyyaama gaafan bahu Gammeen kufee jira,'' jechuun gaddaan dubbatu.
Yeroo ala bahanis hiriyaa isaa sana Obbo Gammachis dhahamani kufan biratti arguu isaanii himu.
Obbo Gammachis qofaa isaanii hin turre, ilma isaanii waggaa shanii waliin ala bahan. Garuu, ilmi homaa hin taane.
Namni alaa bilbileef hiriyyaa isaafi ogummaan isaa abukaatoo akka ta'e kan himan Aadde Masarat 'hiriyaa isaa keessaa hiriyaa addaafi kan inni amanatudha,' jechuun ibsun.
Boodarra garee qorannoo gaggeessurraa akka hubannetti yeroo ammaa kan shakkamee to'annoo jala jiru nama hiriyyaa Obbo Gammachis jedhame kanadha.
Yeroosuma gargaarsa gaafachuun Aadde Masarat Obbo Gammachis Hospitaala Waliigalaa Naqamtee geessan. Ta'us, gargaarsi gahaa hin taasifamneef jechuun himatu Aadde Masarat.
''Akka kootti gaafan hubadhu duuni isaa waan qindaa'e fakkaata,'' jechuun himu.
Medikaal Daarektarrii Hospitaala Riifaraala Naqamtee Dr. Daamxoo Gaarradoo garuu kana ni mormu.
''Nubira dhufanii daqiiqaa tokkofi sakandii 20 caalaa hin turre'' kan jedhan Dr Daamxoon, yeroo gabaabaa keessatti gargaarsi gahaa taasifamuu dubbatu.
Yeroo Obbo Gammachis hospitaala gahaniyyuu 'du'aniiru jechuu dandeenya,' jechuun BBC'tti himan.
Isa irra -deddeebbiin meeshaan itti dhuka'e caalaa isa waraanamaniin du'an kan jedhan Dr Daamxoon, meeshaa itti waraanaman 'cuubee' akka ta'etti tilmaamame malee ifatti hin baramne jedhan.
Yaalii ajjeechaa waggaa tokko dura raawwate jedhame
Yaaliin ajjeechaa Obbo Gammachiis irratti waggaa tokko dura A.L.I Sadaasa bultii 05, bara 2011 raawwatee akka ture maatiin himu.
Kunis achuma magaalaa Naqamtee keessattidha.
Haati warraa akka jedhanitti gaafa sana manni isaan keessa jiraatan bakkatti konkolaataa dhaaban waan hin qabnef mana barumsaa Aask jedhamu keessa konkolaataa dhaabanii yeroo Obbo Gammachis manatti galan galgala sa'aatii 1 booda yaaliin ajjeechaa irratti raawwate.
Dhimmi yeroosi poolisiitti gabaafamus furmaata waan argate akka hin taane himu Aadde Masarat.
Ajjeechaa tibbanaa dura Obbo Gammachis waan sodaatan wayii qabu turanii jennee kan gaafanneen Aadde Masarat, ''Isa kana asirratti dubbachuu hin danda'u,'' jedhan.
Obbo Gammachis ijoollee lama: Dubara umrii 10 fi dhiira umrii 5 Aadde Masarat irraa kan godhatan yoo ta'u taate bara darbe isaan dhaqqabe caalaatti qondaaltota irraa waan dabalataa argachuun hin danda'amne.
Dhimmi ajjeechaa waggaa dura raawwate kuni waggaa dura poolisii bira gahuufi ragaan kennamuu himu Aadde Masarat. Garuu, wanti murtaa'e akka hin jirre dubbatu.
Himannaa Itiyoo Telekoom
Akka maatiin jedhanitti, erga yaaliin ajjeechaa waggaa tokko dura irratti raawwatee booda Obbo Gammachis jijjiirraa hojii fi hojii biraa barbaaduu eegalanii turan.
Hojii Raawwachiiftuu Olaantuu Itiyoo Telekoom Aadde Firehiywoot Taammiruutti Obbo Gammachis yeroos yaaddoo jireenyaa akka qaban itti himu haati warraa isaanii dubbatu.
''Itti hime, yaalii irratti gaggeeffame kana hubatte bakka sii barbaanna jetteen,'' jedhu Aadde Masarat.
Sagalee meeshaa (dhukaasa) gaafan dhagahu iyyaama gaafan bahu Gammeen kufee jira
Aadde Masarat Hundeessaa, Haadha warraa Obbo Gammachis
Haa ta'u malee, kuni milkaa'uu hin dandeenye.
Dareektarri Waliigalaa Itiyoo Telekoom Aadde Carar Akliluu Obbo Gammachis jijjiirraa hojii akka gaafatan BBC'f mirkaneessaniiru.
Waajjirri isaaniis Obbo Gammachis sadarkaa isaanii gad - buusanii akka gara Finfinnee dhufuu danda'an himuufis Obbo Gammachis immoo kana diduu isaanii himu.
''Obbo Gammachis Daarektara Itiyoo Telekoom damee Lixaa turan. Sadarkaadhuma hojii kanaan faayidaawwan addaa giti suni qabu waliin gara Finfinnee akka jijjiiramanif gaaffii dhiheessaniiru,'' jedhan.
Qondaalli kuni gaaffiin Obbo Gammachis gaafatan waggaa dura eegale akka ta'e mirkaneessanii, Obbo Gammachis garuu deebii Hojii Raawwachiistuu Olaantuu Itiyoo Telekoom akka hin fudhanne himu.
''Sadarkaa isaan gaafataniin hojiin hanga argamutti sadarkaa hojii biraan ( Daarektaraa gadiin) akka gara Finfinnee dhufuu danda'an Hojii raawwachiiftuun olaantuu Itiyoo Telekoom eeyyamaniiruufi,'' jedhan.
Dabalataan immoo, hanga sadarkaan gita hojii daarektaraa argamutti hojii biraa akka hojjetan, gaafa sadarkaan gita hojii isaan qaban (daarektara) bahe garuu akka jijjiiraman xalayaan Aadde Firehiywoot barreessan ni eera.
Haa ta'u malee, Obbo Gammachis ''sadarkaa daarektara gadiin gara Finfinnee dhufuf fedhii akka hin qabnedha mul'isa,'' jedhu Aadde Carar ergaa imeelii qondaaltonni lamaan walii deebisan ilaaluun BBC'tti yeroo dubbatan.
Haati warraa isaanii carraan hojii irra -deddeebiin bahaa turu himanis, Aadde Carar garuu gita hojii isaaniin hojiin akka hin baane eeru.
Kanaanis, dhaabbatichi 'waan gochu danda'u godheera,' jechuun himu Aadde Carar.
'... ijoolleen isaa ijoollee abbaa hin qabne hin taatu ture'
Erguma yaaliin ajjeechaa irrati raawwate jedhamee booda sababa Obbo Gammachis magaalaa Naqamtee keessa turuu fedhan kan gaafanneen Aadde Masarat 'dirqamanii achuma turuuf murteessani' jedhu.
'Tokkoffaa Yunivarsiitii Wallaggaatti (kan Naqamtee jiru) kaadhimamaa doktoraati. Barumsa dhiisee deemuu hin danda'u. Lammaffaa immoo hojii yoo dhaabe maatiin akka miidhamu sodaa waan qabuf kana hin goone,' jedhu.
Ajjeefamuun isaanii torban muraasa dura ''hamman du'utti na eegdaa'' jechuun Obbo Gammachis Aadde Firehiywoot akka gaafatan kan dubbatan haati warraa, kanaanis yeroos hooggantuun Itiyoo telekoom Obbo Gammachiisitti bilbiluun afaan akka waldarban himu.
Sababa kanaanis, ''du'i Gammachiis karaa isheetiin hafuu osoo danda'u waggaa meeqa guutuu baksifni meeqa bahee dhabe,'' jechuun akka gargaarsi hin taasifamneef himu.
Obbo Gammachis waggoota 10 olif dhaabbata Itiyoo Telekoom akka hojjetan kan himan Aadde Masarat ajjeechaa tibbanaa booda ''jiraatti warri nu gargaaruu dadhaban, du'arratti dhufanii nu ilaalaniiru,'' jechuun himan.
''Mootummaan rakkoo furu ykn hooggansi rakkoo furu jiraatee biyya kana gadhiisee bahe ijoolleen isaa ijoollee abbaa hin qabne hin taatu."
"Gammeen nama biyya kanaaf bu'aa buusu malee nama maatii isaa duwwaaf bu'aa buusu miti,'' jechuun ibsu.
''Ofii isaa caalaa nama namaaf dhimmudha,'' jechuun kan ibsan Aadde Masarat, dhimmoota gaaruummaan kan hubatuufi nama kabajudha jechuun abbaa ijoollee isaanii of biraa dhaban gadda keessa ta'un ibsu.
Obbo Baalchaa Reebaa: 'Bara kana Itiyoo-telekoom cinaatti dhaabbilee lamaaf hayyamni ni kennama'